သင့်အားတိရိစ္ဆာန်အစာအတွက်အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီးလှပသောကြည့်ရှုနိုင်သောစိုက်ပျိုးရေးဖွဲစက်ကိုထောက်ပံ့ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်တရုတ်နိုင်ငံမှယုံကြည်စိတ်ချရသောလျှပ်စစ်ဖောင်းစက်အားထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။,သင်ရွေးချယ်ရန်မတူညီသောအရောင်နှင့်အမျိုးမျိုးသောစွမ်းရည်ရှိသည်. စက်မှုလုပ်ငန်းစံသတ်မှတ်ချက်အရလူကြိုက်များသောဖောက်သည်များအားလျှပ်စစ်ချောဖြတ်စက်နှင့်ဒီဇယ်အင်ဂျင်ဖွဲရှု့စက်များကိုအကောင်းဆုံးထုတ်လုပ်သည်။.
ဒီဇယ်လည်ပတ်ထားသောချောဖြတ်စက်ကိုတစ်သားတည်းအရွယ်အစားဖြင့်အစာကျွေးမှုကိုထိထိရောက်ရောက်ဖြတ်တောက်နိုင်ရန်အရည်အသွေးရှိသောမာကျောသောဓါးများဖြင့်ပံ့ပိုးထားသည်။,သိုး,ဝက်,သမင်,တစ်ဖွဲရှုးထုတ်လုပ်သူအဖြစ်, ကျနော်တို့ထို့အပြင်အရည်အချင်းပြည့်မီသောထုတ်ကုန်အဖြစ်ကောင်းသောဝန်ဆောင်မှုကိုလည်းရှာပါ, ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်သူတို့၏အစာကျွေးမှုလျော့နည်းစေသည့်စွမ်းရည်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ chaff ရှုးစက်အားသာချက်ရှိပါတယ်:
3.မြက် roller ရိုးတစ်လောကလုံးနားချင်းဆက်မှီရွေးချယ်ရေး,ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းပုံ,လွယ်ကူသောစစ်ဆင်ရေး,လွယ်ကူသောစည်းဝေးပွဲကို.
5.အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိနှင့်အတူလျှပ်စစ်ဖွဲရှုးစက်ဓါး,အထူး refining ဖြစ်စဉ်ကို,စူပါ wear- ခံနိုင်ရည်,
6. switch မှထိန်းချုပ်ထားသောအဆင့်မြင့်အစာကျွေးခြင်းနှင့်သယ်ဆောင်သည့်ယန္တရား, ပြောင်းရန်လွယ်ကူသည်, လွတ်လပ်စွာကြိုတင်နှင့်ဆုတ်ခွာ.
7. အကြီးဆုံးပြည်တွင်းမော်ဒယ်, အဖဲ့ရှုး၏အမြင့်ဆုံးထိရောက်မှု; ပြုပြင်မှုရော်ဘာတာယာ, ကြီးမားသောပစ္စည်းကိရိယာများကိုဖြေရှင်းရန်, မိုဘိုင်းအဆင်မပြေ၏အဆင်မပြေ.
8. အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိ၏ဓါးရွေးချယ်ရေး, အထူးဖြစ်စဉ်ကိုအားဖြင့်သန့်စင်, စူပါ wear- ခံနိုင်ရည်; မြင့်မားသောခွန်အားသော့ခလောက်, လုံခြုံစိတ်ချရသော၏အသုံးပြုမှုကို.
1,ဒီအမှိုစက်စက်ရုံသည်မြက်စိမ်းနှင့်သင့်တော်သည်, ဂျုံကောက်ရိုး, ကောက်ရိုး, ချစ်သူ, တိရိစ္ဆာန်များကိုကျွေးမွေးဖို့ပြောင်းသို့မဟုတ်စပါးအညှာ,ထိုကဲ့သို့သောကျွဲနွားမြင်းစသည်တို့အဖြစ်.
(L ကို * W * H ကို) (မီလီမီတာ)